Juventus oo isku daraysa Paulo Dybala iyo lacag kaash ah si ay kooxda Liverpool uga hesho xiddiga… – Gool FM
Muxuu Pep Guardiola ka yiri guushii weyneyd oo ay Manchester City ka gaartay Wolverhampton?
Kooxaha Manchester United, Barcelona, Milan & Guud ahaan kulammada caawa laga ciyaari doono qaar ka mid ah SHANTA horyaal ee ugu waa weyn Yurub iyo tartanka Copa del Rey
Horudhac: Barcelona vs Sevilla… (Shaqo adag oo hor taalla Barca si ay ugu gudubto fiinaalka Copa del Rey)
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Man City iyo Wolverhampton ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Juventus oo isku daraysa Paulo Dybala iyo lacag kaash ah si ay kooxda Liverpool uga hesho xiddiga…
(Turin) 22 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa la soo warinayaa inay ciyaaryahankeeda Paulo Dybala oo lagu daray lacag kaash ah ay siinayso Liverpool si ay uga soo qaadato Mohamed Salah.
Kooxda xafidanaysa horyaalka Talyaaniga ayaa doonaysa inay xoojiso safkeeda xagaagan kaddib markii xilli ciyaareedkii hore ay ku soo iibsatay Cristiano Ronaldo 100 milyan oo gini, waxaana ay durbadiiba xaqiijiyeen inay si xor ah kula soo wareegayaan Aaron Ramsey oo kaga imaanaya Arsenal.
Si kastaba ha ahaatee, agaasimaha isboortiga ee Juve, Fabio Paratici ayaa la fahamsan yahay inuu Salah ka dhigtay mid ka mid ah bartilmaameedkiisa ugu sarreeya, kaddib markii xiddiga xulka qaranka Masar uu qaab ciyaareed cajiib ah soo bandhigay tan iyo markii uu Liverpool kaga soo biiray Roma sanadkii 2017-kii.
Waxay u badan tahay in Liverpool ay dalban doonto lacag rikoorka adduunka ah haddii ay iska iibinayaan 26-sano jirkaan Salah, laakiin Tuttomercatoweb ayaa sheegaysa in kooxda Juve ay fiirsanayso inay arrintan ku xaliso Dybala oo ay heshiiskan qeyb uga dhigayso.
Reds ayaa la fahamsan yahay inay xiiseynayso xiddigan reer Argentine, kaasoo si aad ah loola xiriirinayay inuu ka tagayo Turin xagaagan, isagoo dhaliyay afar gool 25 kulan oo uu ciyaaray horyaalka Serie A illaa iyo haatan xilli ciyaareedkan.
Juventus ayaa weli doonaysa inay isku darto lacag kaash ah iyo sidoo kale Dybala si ay u suuro-geliso qiimaha ay Liverpool ku rabto Salah, Kooxda lagu naanayso Old Lady ayaana diyaar u ah wax waliba inay samayso si ay Reds uga hesho weeraryahanka reer Masar.
Warbixinta uu daabacay wargeysku kuma sheegin inta ay la egtahay cadadka lacageed ee lagu darayo Dybala si ay Juventus kooxda Liverpool ugala soo wareegto Mohamed Salah.
Xiddiga xulka qaranka Masar ee Salah ayaa dhaliyey 64 gool 91 kulan oo uu u saftay kooxda Liverpool tan iyo markii uu yimid garoonka Anfield.
Real Madrid oo la soo wareegaysa xiddig kale oo ka ciyaara Horyaalka Premier League haddii ay ku guuldarreystaan saxiixa Eden Hazard
Labada weeraryahan ee midkood ay kooxda Barcelona bedel uga dhigayso Luis Suarez oo daaha laga rogay